1Password, umphathi wephasiwedi ocabanga ku-Linux | Kusuka kuLinux
1Password, umphathi wephasiwedi ocabanga ku-Linux
UJoaquin Garcia Cobo | | Aplicaciones, I-GNU / Linux
Abasebenzisi be-Gnu / Linux bahlala benesendlalelo sokuphepha abanye abasebenzisi bezinye izinhlelo zokusebenza abangakaze babe naso, kepha lokhu akusenzi uhlelo olungenangqondo.
Kungakho kunamathuluzi we-Gnu / Linux esingakwazi ukuwafaka siwasebenzise ukwenza idatha yethu nemishini yethu iphephe kakhulu.
Cha, ngeke sikhulume nge-antivirus yendabuko kepha ngohlobo lwethuluzi elingaziwa kepha elibaluleke ngokwengeziwe: abaphathi be-password.
Umphathi we-password usivumela ukuthi sisebenzise amaphasiwedi aqinile kumawebhusayithi noma kuzinhlelo zokusebenza ngaphandle kokubamba ngekhanda ngalinye lawo.
KuDesdeLinux sikhulume ngakho noma yikuphi kwalokhu okukhethwa kukho, kepha muva nje sekukhishwe inguqulo yokuqala ezinzile yomkhiqizi wephasiwedi ehlanganisa cishe ngokwendabuko nokusatshalaliswa kweGnu / Linux. Leli thuluzi ibizwa nge-1Password.
I-1Password iyithuluzi le-cross-platform elibanzi kakhulu. Ngalokhu sisho ukuthi abathuthukisi abadalanga kuphela inguqulo yohlelo ngalunye lokusebenza kepha futhi kwethulwe isandiso seziphequluli ezinkulu zewebhu futhi iyahambisana ngokuphelele nezicelo ezithandwa kakhulu emakethe. Lesi sakamuva sisivumela ukuthi sisebenzise i-1Password cishe kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza olunephasiwedi esinayo.
1Password has ukuvikela ukubethela kokuphela kokuphela okwenza kuphephe ukufaka iphasiwedi nganoma iyiphi indlela. Inemisebenzi eyengeziwe ethokozisayo efana nokuvikela ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi nokuvikela ama-keylogger. Okokuqala kwenza uhlelo lokusebenza lubone isiza futhi uma kuyisiza sokukhwabanisa noma sobugebengu bokweba imininingwane ebucayi, iphasiwedi ngeke ifakwe. Ukuvikelwa kwesibili kwenza ukuthi uhlelo olusebenzayo noma iwebhu ingakuboni okokufaka kwezinhlamvu ngokhiye ngamunye ngakho-ke akunakuthungathwa.
Abathuthukisi be-1Password nabo baveze okunye ukuvikelwa ukuthi hlanza ibhodi lokunamathisela ngendlela yokuthi akekho noyedwa ongalandelela iphasiwedi kuhlelo lokusebenza. Lokhu kungaheha kepha futhi kungaba wuhlupho uma senza amakhophi amaningi wokukopisha. Lokhu sekuvele kuncike ekusetshenzisweni okunikezwa yilowo nalowo.
Ngokumangazayo, ngiphawula lokhu ngoba akuvamile ukuthi uhlelo lokusebenza lugxile noma lukhombise okuthandwa yi-Gnu / Linux hhayi olunye uhlelo lokusebenza, uhlelo lokusebenza lwe-Gnu / Linux lunemisebenzi izinhlelo zokusebenza ze-1Password zamanye amapulatifomu ezingenazo.
Omunye wale misebenzi eyengeziwe uku ukuhambisana kernel, kusilawuli sephasiwedi esisiza ukubona ukuthi ngabe othile ucela amaphasiwedi nokuthi aphephile yini noma cha; imininingwane eyengeziwe yokuthi ubani othola ini; ukuhambisana okugcwele nabaphathi bewindi abakhulu kufaka phakathi ukusebenza kwemodi yasebusuku; futhi, mhlawumbe okubaluleke kakhulu, ukusetshenziswa kwe- injini yokusesha enamandla ehambisana nohlelo lwesigaba lokho kuzosivumela ukuthi siphathe futhi siseshe amaphasiwedi ethu noma imininingwane emayelana nabo ngaphansi nje kokushaywa kwamagundane amathathu.
uhlelo lokusebenza lwe-Gnu / Linux lunemisebenzi izinhlelo zokusebenza ze-1Password zamanye amapulatifomu ezingenayo
1 I-1Password ibuye ibe nezingqinamba
2 1Password ukufakwa ku-Gnu / Linux
I-1Password ibuye ibe nezingqinamba
Umphathi we-password muhle kakhulu, mhlawumbe uhamba phambili emakethe, kepha unephutha: linakho intengo yanyanga zonke.
Futhi ngalokhu angisho ukuthi yini okufanele ibe mahhala, ngokwami ​​angicabangi ukuthi yonke isoftware kufanele ibe mahhala. Kepha I-1Password inomphumela we-lockin onganconyiwe emhlabeni wezokuphepha. Lapho sisebenzisa insiza, sinesikhathi sokuzama sezinsuku eziyi-14, ngemuva kwalesi sikhathi kufanele sikhokhe u- $ 2,90 ngenyanga. Uma singafuni ukukhokha, kungaba ngoba singafuni noma ngoba singenamali, umphathi uzoyeka ukusebenza ngakho-ke ngeke sisakwazi ukufinyelela kumaphasiwedi ethu.
Uma kuliqiniso ukuthi singenza ikhophi eyisipele yalawa maphasiwedi, kodwa futhi singasebenzisa incwajana futhi sinamathisele amaphasiwedi lapho, kungaphephile.
Futhi ayisiniki ithuba lokuthola isoftware futhi senze isondlo ngokwethu ngokufaka kuseva yethu, okuthile okwenziwa abanye abaphathi be-password.
Uma siqhathanisa nabanye abaphathi be-password, intengo ye-1Password ayiphakeme kakhulu futhi ihambisana nezinye izinhlelo ezifanayo, kepha lokhu akubangeli umphumela we-lockin, okungukuthi, ukuncika ohlelweni, ube yingozi futhi ube lapho.
1Password ukufakwa ku-Gnu / Linux
Ukufaka i-1Password kusistimu ye-Gnu / Linux kulula kakhulu. Kukhona amaphakheji wokusabalalisa okuyinhloko, ngakho-ke uma sinokusatshalaliswa Kususelwa ku-Debian, kufanele nje silande iphakethe lesikweletu futhi uyiqhube.
Uma, ngakolunye uhlangothi, sinokusabalalisa okususelwa ku- UFedora noma iRed Hat elisebenzisa uhlelo lwe-rpm package, ngoba kufanele silande iphakethe le-rpm futhi uyiqhube.
Futhi sinethuba lokuyifaka ngokusebenzisa isitolo esidayisa izitolo, ngalokhu kufanele siye kokungena kwe-1Password bese sikufaka njenganoma iyiphi iphakethe le-snap.
Futhi kubasebenzisi abangomakadebona abathemba ukuphela, singakwenza ngokusebenzisa i-terminal. Ukwenza lokhu sivula ukuphela bese sibhala okulandelayo:
i-curl -sS https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc | I-sudo gpg - isikhali - ukuphuma / usr/share/keyrings/1password-archive-keyring.gpg
Okulandelayo sengeza okugciniwe:
i-echo 'deb [arch = amd64 isayinwe-ngu = / usr / share / keyrings / 1password-archive-keyring.gpg] https://downloads.1password.com/linux/debian/amd64 main main' | i-sudo tee /etc/apt/source.list.d/1password.list
Ekugcineni siyifaka ngemiyalo:
ukuvuselelwa kwe-sudo apt && sudo apt ukufaka i-1password
Futhi uma singenayo i-Fedora noma i-Ubuntu, noma okuphuma kukho, asifuni iphakethe le-snap, kepha nje sisebenzisa iManjaro noma i-Arch Linux, lapho-ke kufanele senze okulandelayo:
i-curl -sS https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc | gpg --import
Ngemuva kokwenza umyalo ongenhla, sifaka iphakethe elisemthethweni le-1Password kokugcina kwethu:
i-git clone https://aur.archlinux.org/1password.git
Futhi senza ukufakwa ngemiyalo elandelayo:
cd 1igama elingukhiye makepkg -si
Futhi uma sinenkinga ngalezi izindlela zokufakaUkuxhaswa kwe-1Password kusinikeza ezinye izindlela zokufaka, kepha hhayi abasebenzisi be-novice.
Ezinyangeni ezedlule benginqikaza impela kubaphathi be-password, bengingazi ukuthi basebenza kanjani futhi bengingacaci kahle ngokuphepha abakunikezayo, kepha selokhu ngaqala ukuyihlola, ngijabule ngalolu hlobo lwesoftware futhi nginayo amadivayisi amakhulu. 1Password kungenye indlela enhle, kepha umphumela we-lockin owukhiqizayo ungikhathaza kakhulu futhi kubonakala sengathi akucaci ukuthi ungayilungisa kanjani. Mhlawumbe uma le nkinga ilungisiwe, I-1Password iba ngomunye wabaphathi bephasiwedi abahamba phambili beGnu / Linux.
Kungakho ukuyisebenzisa Ngokwezinga lomuntu siqu, ngicabanga ukuthi akunconyiwe. Kodwa-ke, ezingeni lebhizinisi, lapho ukuphepha okuphezulu nesoftware esekelwa khona kudingeka ngaphezu kwezinga lomuntu siqu, i-1Password ibonakala iyindlela engcono kunazo zonke: ukwesekwa elikunikezayo nangejubane elikunikezayo ukusetshenziswa kwezinhlelo zokuphepha akusenzi sikhiqize kancane.
Kunoma ikuphi, uma ufuna isoftware efanayo, isincomo sami esihle kakhulu ukuthi ulanda isilingo sezinsuku eziyi-14 futhi uyihlola ngamasayithi angabalulekile nangamaphasiwedi enziwe ngezifiso ongawakhumbula, yisebenzise kakhulu ngangokunokwenzeka futhi ubheke ukuthi i-1Password izifanela ngempela yini izidingo zakho noma cha. Ngenze njalo futhi ukusesha kwami ​​kwaxazululwa ngokushesha.
Umthombo nezithombe .- 1Password Blog
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » 1Password, umphathi wephasiwedi ocabanga ku-Linux
Angithembi lutho oluvela kubaphathi be-password efwini. Ngisho ne-1Password, noma i-Bitwaden, noma i-LastPass… engibe nenkinga ngayo… Ngokuhamba kwesikhathi bagcina bephule ukuphepha, yize ngingenanto "ebalulekile" engingayigcina.
Futhi angiyethembi iMozilla noma iGoogle kwiziphequluli zayo ... Imayini i-KeepassXC endaweni yangakini, futhi ngaphezu kwakho konke, iphethini eyami. Angidingi mphathi onephethini.
UJoaquin Garcia Cobo kusho
Sawubona, benginokungabaza okukhulu ngabaphathi be-password, kepha lapho ngizama izinguqulo zakamuva ngazithanda kakhulu futhi ngicabanga ukuthi azidali ukwephulwa kwezokuphepha yize nginawe ukuthi i-Cloud iyinto eyingozi, inketho engcono ukuthi unayo kuseva yakho noma kukhompyutha efanayo, ngaphandle kokungabaza.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula 🙂
Phendula uJoaquin García Cobo
Ngokudabukisayo, cha. Kungenzeka impela ukuthi umphathi wephasiwedi asebenzise isiphakeli ngokusebenza okuthile ngenkathi engathembi.
I-beta 12 ye-Android isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
Abaphathi be-password: iziphi ezitholakalayo ze-GNU / Linux?